Vanhurume Vakachecheudzwa Vobatwa neHutachiwana Kudarika Varume Vasina Kuchecheudzwa
Chikunguru 09, 2012
Vanhurume vakachecheudzwa vanonzi vari kubatwa nehutachiwana hweHIV zvakanyanya kana zvichienzaniswa nevanhurume vasina kuchecheudzwa.
Izvi zvakabuda mugwaro reongororo ra2010/2011, iro rakaburitswa neZimbabwe Health Demographic Survey.
Gwaro iri rinoratidza kuti zvikamu gumi nezvina kubva muzana zvevanhurume vakachecheudzwa vane makore ari pakati pegumi nemashanu nemakore makumi mana nemapfumbamwe, zvakabatwa nehutachiwana hweHIV zvichienzaniswa nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana zvevanhurume vasina kuchecheudzwa vemazera mamwe cheteyo.
Ongororo iyi inotiwo Zimbabwe ndiyo nyika iri pamusoro pakushandiswa kwemakondomu zvichienzaniswa nedzimwe nyika mupasi rose mukati memakore mashanu adarika, danho rinonzi rakaderedzawo kuparadzirwa kwehutachiwana hweHIV.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano, Dr Elopy Sibanda, vanoti ongororo iyi inoshamisa zvikuru sezvo danho rekuchecheudza vanhurume rakatorwa paonekwa kuti rinoderedza kupararira kwehutachiwana hweHIV.
Nhengo yebhodhi rinoona nezveHIV/AIDS musangano reInter-Parliamentary Union, uye vari nhengo yeparamende vachimirira MDC-T, Muzvare Tabitha Khumalo, vatiwo zvakakosha zvikuru kuti dzidziso yekushandiswa kwemakondomu isvitswe kune varume vanenge vachecheudzwa, kuitira kuti vasafunge kuti vakachecheudzwa havachawirwa nedambudziko reHIV/AIDS.
Hurukuro naDoctor Elopy Sibanda